XBOX Uchungechunge X/S
Bukela namhlanje iNintendo Direct apha
1 Julayi 2022 by UAlistair McDonald
Okokugqibela, sineseti efanelekileyo yeNintendo Direct kwishedyuli. Layisha ngo-2pm ixesha lase-UK kwisibhengezo somboniso othatha imizuzu engama-25, ugxile kwimidlalo yomntu wesithathu. Lindela ukujonga kwimidlalo yoTshintsho eyenziwe ziinkampani ngaphandle kweNintendo - ke, akukho themba leZelda: Ukuphefumla kwe-Wild 2 iindaba apha. umthombo
iindidi iindaba Ushiye uluvo
UHideo Kojima wayekhe wacwangcisa iprojekthi ye-superhero efana neAmazon's Abafana
U-Death Stranding's u-Hideo Kojima uveze ukuba wayekhe wapheka iprojekthi efana ne-Amazon's superhero series Abafana. “Ndiyekile emva kweziqendu ezithathu zesizini yokuqala,” wabhala uKojima kuTwitter, exoxa ngothotho. “Ndiye ndacinga ukuba ndiza kuwubukela wonke umboniso. Ngokwenyani, ndibukele iziqendu ezimbalwa ezihanjiswe kwi… Funda ngokugqithisileyo
Umzi-mveliso wevidiyo we-Québec uza kuchatshazelwa ngumthetho weelwimi ophikisanayo
Iinkampani zomdlalo wevidiyo eQuébec ziyakuchatshazelwa ngumthetho omtsha ophikisanayo wolwimi. Injongo yoMthetho osaYilwayo wama-96 kukuqinisa imithetho yeelwimi yephondo elithetha isiFrentshi, ukuqinisekisa ukuba isiFrentshi lolona lwimi luthethwayo kuyo yonke into ukusuka kwezoshishino ukuya kwezempilo. Nangona kunjalo, kuyoyikwa ukuba oku kuya kugxotha abantu abangathethi isiFrentshi kumzi mveliso wevidiyo waseQuébec. … Funda ngokugqithisileyo
I-remaster ye-Blade Runner egxininisiweyo ngoku ibandakanya inguqulelo engabuyiselwayo kwi-Steam
I-Dev tweets umfanekiso wokuqala we-PS VR 2 endle, uyayicima
Sonke siyayazi ukuba isendleleni, kodwa i-PS VR2 iseyimfihlakalo kuthi thina singayazi imisebenzi yangaphakathi kwaSony. Nangona kunjalo, umphuhlisi omnye wabelane (kwaye wasusa ngokukhawuleza) umfanekiso we-PS VR2 ebekwe kwihlabathi lokwenyani. Umfanekiso uvela kuBit ... Funda ngokugqithisileyo
Iipatshi ezintsha zePC yoMhlali ongendawo zibeka esichengeni izinto ezibonakalayo kwaye zibethe ukusebenza nzima
30 Juni 2022 by UAlistair McDonald
Andinanto ingako endinokuyithetha, kodwa akukho mathandabuzo ngayo: inkxaso yokulandela umkhondo inika ukonyuswa komgangatho uwonke, ngakumbi ngenxa yokuba imiboniso yeRT ithatha indawo yembonakalo eyoyikekayo yendawo yesikrini efunyenwe kuguqulelo oludala. Ukhanyiso lwehlabathi olulandelwa nguRay lukwayindawo elungileyo yokudibanisa, ithatha indawo yescreen-space occlusion ngokuchaneka ngakumbi… Funda ngokugqithisileyo
IHarvestella ibonakala ngathi iFantasy yokugqibela idibana neStardew Valley
I-Harvestella bubomi obutsha be-sim RPG ukusuka kwi-Square Enix iza kwiTshintsho kunye ne-Steam ngoNovemba. YiNgcinga yokuGqibela idibana neStardew Valley, kunye nomdlalo obandakanya ukulima izityalo, ukwenza ubuhlobo nabantu basezidolophini, kunye nokuhlola imigodi. Concept art nguIsamu Kamikokuryo of Final Fantasy 12 udumo, kwaye umculo nguGo Shiina ukusuka Tales series. … Funda ngokugqithisileyo
I-Gmail ye-Android, i-iOS yongeza isalathisi esifanelekileyo 'soGcino olusetyenziswayo'
30 Juni 2022 by Isalathisi
Kwiwebhu, i-Gmail kudala iqaphela ukuba ungakanani ugcino olusebenzisayo emazantsi ephepha. Isalathisi "esisetyenzisiweyo soGcino" ngoku sikwi-Gmail ye-Android kunye ne-iOS ukukusindisa ekufuneni ukuvula enye i-app okanye iwebhusayithi yolawulo lwendawo. Kaninzi…. Inqaku lokuqala
iindidi TECH Ushiye uluvo
I-RIP RTX 3080 12GB – bekungafanelekanga ukuba ubekho kwasekuqaleni
I-Nvidia kucingelwa ukuba iyekile ukuveliswa kwekhadi lemizobo ye-GeForce RTX 3080 12GB, eyona ndlela inamandla ye-RTX 3080 GPU. Kubalulekile ukuqaphela ukuba ayisosibhengezo esisemthethweni ke thatha olu lwazi ngetyuwa, kodwa umsebenzisi we-Twitter kunye nomthandi we-GPU @Zed_Wang ubanga ukuba ikhadi alizu ... Funda ngokugqithisileyo
iindidi HLAWULWA Ushiye uluvo
I-Asus ROG Phone 6 ezayo kaJulayi 5 ngokumelana namanzi kunye nomnye umlandeli wokupholisa ophambeneyo
Uluhlu lwefowuni ye-Asus ROG luzele lukhetho olunamandla kwaye lwenziwe kakuhle, kwaye imodeli entsha ikufuphi nekona. Ecaleni kokuvuza okuthile, ngoku sinento ekhangeleka ngathi ngumhla wokukhutshwa kwe-Asus ROG Phone 6. ngaphezulu... Inqaku lokuqala
INintendo Direct Mini: iPersona 5 yasebukhosini, iPersona 4 yeGolide, kunye nePersona 3 ephathekayo yonke into ezayo ekutshintsheni
INintendo Switch ibingumxholo wamahemuhemu amaninzi kule minyaka idlulileyo, kodwa akukho nalinye elithe lazingisa njengelizwi kangangokuba uthotho lwePersona luza kuza kwikhonsoli. Ngexesha losasazo lwamva nje lweNintendo Direct Mini, la marhe ekugqibeleni abe yinyaniso. Isithathu sikaPersona 5 Royal, Persona 4 Golden, kunye ... Funda ngokugqithisileyo
iindidi Nintendo, HLAWULWA Ushiye uluvo
INintendo Direct Mini: Phila iDemo ephilayo ekhoyo ngoku kwi-eShop
Phila Uphile, iSNES RPG yasentsomini engazange ifumane indawo esemthethweni apha eNtshona, iza kwiNintendo Shintsha ngoJulayi 22. Ukuba ubunethemba lokunika umdlalo isivunguvungu ngaphambi kokuba ufike ezivenkileni, uNintendo uye wagubungela: kukho idemo ehlala kwi-eShop ngoku. Thatha isitulo ... Funda ngokugqithisileyo
iindidi Nintendo Ushiye uluvo
I-Callisto Protocol iya kuba ngumdlalo onzima kakhulu kune-Dead Space
UGlen Schofield uziva ekhululekile. Sele, uyabona, iiveki ezimbalwa zomdali weNdawo efileyo, iqela lakhe elitsha ekugqibeleni likhuphe umbono wokuqala kwindawo yalo eyoyikisayo, etyibilikayo kunye neyoyikekayo yeCalisto Protocol kwiGeoff Keighley's Summer Games Fest-isityhilelo esiphawula inqanaba elibalulekileyo kwi… Funda ngokugqithisileyo
Page1 Page2 ... Page3,968 Okulandelayo →